Search Term: အောင်ဆန်းစုကြည် , 108 results have been searched, Search time: 0.032 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
NL Yangon (71)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် (13)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် - အတ္ထုပ္ပတ္တိ (8)
မြန်မာနိုင်ငံ - နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (4)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်- အတ္ထုပ္ပတ္တိ (3)
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်(၁၉၄၅-) (2)
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ (2)
မြန်မာနိုင်ငံ - နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်အစိုးရ (2)
မြန်မာနိုင်ငံ- နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ; အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် (2)
အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဒေါ်- အတ္ထုပ္ပတ္တိ (2)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် - အင်တာဗျူး (2)
တင်ဦး၊ ဦး၊ သူရ-အင်တာဗျူး (1)
ဆန်းကြယ်၊ မောင် (3)
ရဲမြလွင်၊ မြန်မာပြန်သူ (3)
ဒေါက်တာ အောင်ခင်ဆင့် (2)
ဝီလျံ ယိုရီ၊ဘာသာပြန်သူ-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (2)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ် (2)
Arrow Luck (Camera) (1)
Frankie ထွန်း (1)
Kraus, Dietmar (Editing Mentor) (1)
More than 180 days (71)
In Library (71)
Not In Library (37)
Total 11 pages First Page <Prev 1234567 8910 Next > Last Page>>
Publisher: ဓမ္မအလင်းအိမ်စာပေ Published Date: ၂၀၁၆
Literature Type: Books , Call No.: ၂၂၀.၁ ဗန် ၂၀၁၆/၁၂၇
Publisher: ဇင်ရတနာစောစာပေ Published Date: 212
အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) ဗုဒ္ဓဘာသာသူရဲကောင်း Ordering
Publisher: သင်းစာပေ Published Date: 2015
Literature Type: Books , Call No.: ၈၀၈.၈၄ ဓမ် ၂၀၁၅/၂၅၅၂
​အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် ပန်းပွင့်နှင်းဆီလင်းရောင်ခြည် Ordering
Publisher: ပန်းဝေဝေစာပေ Published Date: 2012
အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့)အဖေ့ကိုယ်ပွားအမေ့ကိုယ်စား Ordering
Publisher: ဇင်ရတနာစောစာပေ Published Date: 2012
အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် ပန်းပွင့်နှင်းဆီလင်းရောင်ခြည် Ordering
Publisher: စံလှစာပေ Published Date: 212
နိုင်ငံရေးဘဝခရီး: အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်ရံတော်ဟောင်း၏ဇာတ်ကြောင်းပြန်ကြည့်ခြင်း Ordering
Author: Arrow Luck (Camera) Wynn Htut (Sound) Nay Kha (Sound) May Htoo Cho (Editor) Wai Mar Nyunt (Project Mentor) Kraus Dietmar (Editing Mentor) Strain Fiona (Editing Mentor) Merrison Lindsey (Producer)
Publisher: ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်း(Yangon Film School - yfs) Published Date: 2015
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ မဟာသီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည်၊ အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့ ဂန္ထဝင်မျိုးဆက်မော်ကွန်း Ordering
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ မဟာသီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည်၊ အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့)အနှိုင်းမဲ့၊ ဂန္တ၀င်မျိုးဆက်မော်ကွန်း Ordering